"လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" အပတ်စဉ်အမေးအဖြေ အစီအစဉ် — မြန်မာဌာန
"လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်" အပတ်စဉ်အမေးအဖြေ အစီအစဉ်
လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်ကို RFA က အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ ညတိုင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်တိုင်း တင်ဆက်နေပါပြီ။ ဒီ အစီအစဉ်ကနေ ပြည်သူတွေ သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဖြေကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
"လူထု နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်"
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သြဂုတ်လ ၅ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်)
ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်)
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်)
ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇူလိုင်လ ၈ ရက်)
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇူလိုင်လ ၁ ရက်)
ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇွန်လ ၂၄ ရက်)
ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇွန်လ ၁၇ ရက်)
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇွန်လ ၁၀ ရက်)
ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇွန်လ ၃ ရက်)
မေလ ၂၇ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မေလ ၂၇ ရက်)
မေလ ၂၀ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မေလ ၂၀ ရက်)
မေလ ၁၃ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မေလ ၁၃ ရက်)
မေလ ၆ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မေလ ၆ ရက်)
ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဧပြီ ၂၉ ရက်)
ဧပြီ ၂၂ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဧပြီ ၂၂ ရက်)
ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဧပြီ ၁၅ ရက်)
ဧပြီ ၈ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဧပြီ ၈ ရက်)
ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဧပြီ ၁ ရက်)
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မတ်လ ၂၅ ရက်)
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မတ်လ ၁၈ ရက်)
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မတ်လ ၄ ရက်နေ့)
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ အစီအစဉ်
လူထုနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)
လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်)။
I can't listen to Feb 18 interview audio.
It said there is no file exit. Can somebody solve the problem.
i want to askafew question.
we want to askasome question.
၁။ျပိးခဲ႕သည္ံေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္မ်ား တစ္ရာေက်ာ္ေနရာရခဲ႕ျပီ။၂။အားလံုးကို ၾကံ႕ဖြံ႕က တရားစြဲျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမေရာက္ေစဘဲ တရားရံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ စြပ္စြဲခံ
အေမစုကိုလဲ ဘယ္လိုကာကြယသင့္သလဲ ေမးေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။လူငယ္တစ္ဥိး
rfa is bad
I just want to ask her.Can she talk with dead person.If not she need to learn how to talk with dead person.then burma will get democracy soon.
ခင်ရွှန်းလဲ့အောင် ကအန်တီစုရဲ့သမီးရင်း ဟုတ် မဟုတ်
အန်တီစုရဲ့Wဘဝတစ်လျှောက်မှာ ယောက်ကျား ၄ ယောက်နဲ ပတ်သပ်ခဲ့တာတကယ်ဟုတ် မဟုတ် .......... အဲဒါလေးတွေအမှန်တကယ်သိချင်လို့ပါရှင့် အန်တီ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကသမီးတို့အတွက်အရေးကြီးနေလို့ပါ
why are there2of the same item??
ၾကာေတာ့ၾကာပီဗ် အဲဒီသတင္းအစအနေပ်ာက္သြားလို့ စိန္ေရာင္းဝယ္တဲ့မိသားစုသတ္တဲ့အမွဳ့က ဘယ္သူ့လက္ခ်က္လဲဆိုတာေလး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ....
အမေစု သားမေးချင်တာက တရားဥပဒေကိုလိုက်နာမူမရှိရင်ဥပဒေစိုးမိုးမူကင်းမဲ.သွားနိုင်ပါသလား လိုက်နာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင်.ပါသလဲအမေ
Daw Suu's answers are very knowledgeable and dignified, well considered.